Sawirro: Maxay ka wada-hadleen Rooble iyo wakiilada beesha caalamka ee C6+? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Maxay ka wada-hadleen Rooble iyo wakiilada beesha caalamka ee C6+?
Sawirro: Maxay ka wada-hadleen Rooble iyo wakiilada beesha caalamka ee C6+?
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan xasaasi ah oo ku saaabsan doorashada la yeeshay Wakiilada Beesha Caalamka ee C6+.
Kulanka ayaa waxaa diirada lagu saaray qodobbo dhowr ah oo khuseeya dhammeystirka, daahfurnaanta iyo amniga doorashada dalka, xilli ay muddo kooban ka harsan tahay mudadii loo qabtay dhameystirka doorashada Golaha Shacabka.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa wakiilada beesha caalamka ee C6+ u sheegay inay ka go’an tahay in doorashadu ku soo idlaato xilligii loo qorsheeyay iyo in aan marnaba cidna lagu xad-gudbin, oo doorashadu noqoto mid daah-furan.
Waxa uu markale ku celiyay in aan la aqbali doonin in ciidamada amnigu ku milmaan arrimaha doorashada, ama inay dad gaar ah u adeegsadaan in lagu boobo kuraas kamid ah Golaha Shacabka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku booriyay ciidamada qeybahooda kala duwan inay ku eekaadan kaalintooda sugida amniga, iyo gudashada waajibaadka dastuuriga ah.
Ugu dambeyntiina waxa uu carabka ku adkeeyay inay lagama maarmaan tahay in la xaqiijiyo qoontada haweenka ee 30%, taas oo hadda gaarsiisan 21%.
Kulankan ayaa imanaya xilli ay beesha caalamka cadaadis xoogan ku saarayo xukuumadda in la dadajiyo doorashada, gaar ahaan midda Golaha Shacabka oo hore loogu cayimay in lagu soo gabagabeeyo 25-ka bishaan.